Ukubuyekezwa kwe-Pinnacle Casino - Funa ama-Spins wamahhala angu-20
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-pinnacle casino
Isibuyekezo se-Pinnacle Casino
Isofthiwe:NetEnt, Betsoft, Microgaming, Red Tiger Gaming, Yggdrasil
Usizo: 24/7 Live Chat
Ibhonasi Lokukwamukela:20 Izikhathi Zokudlala Mahhala
Sikubona njengomkhuba wesimanje ukuthi amakhasino e-inthanethi amukela ama-sportsbook abukhoma futhi abhekiswe kusigaba esisha sabadlali. Kodwa-ke, kwakuwunyaka we-1998 lapho i-Pinnacle isungula i-sportsbook ye-inthanethi yase iyihlanganisa nemidlalo yasekhasino ye-inthanethi kamuva. Ikhasi lasekhaya e-Pinnacle livula ku-sportsbook yayo, equkethe izimakethe eziningi zezemidlalo zesifunda nezamazwe omhlaba ezihlanganisa yonke imidlalo ethandwayo nemincintiswano. Khumbula, amakhasino e-inthanethi ayeyinto entsha ngaleso sikhathi.
Kodwa-ke, ngokuhamba kweminyaka ikhasino ibonise ukuthi ingenzani futhi iyaziqhenya ngemidlalo engaba ngu-2 000 evela konjiniyela abaholwa yi-Microgaming, i-NetEnt, i-BetSoft, i-Evolution, njll. Imidlalo ihlanganisa zonke izigaba zamakhasino ezinjengama-slot, imidlalo yasetafuleni, i-poker yevidiyo, imidlalo ebukhoma, kanye nemidlalo engajwayelekile efana ne-bingo ne-keno. Ngoba iyi-sportsbook kuqala, i-Pinnacle ayinayo iphakheji enhle yokukwamukela futhi inamaphromoshini ahlukahlukene esikhashana. Okuhle ngukuthi amalungu awasindwa yizibopho zokubheja.
I-Pinnacle isebenzisane nabahlinzeki besofthiwe yemidlalo abanemidlalo elayisensiwe eqinisekiswa njalo ngabacwaningi mabhuku abazimele ukuthi imiphumela yayo ilungile. I-Pinnacle casino inobudlelwano ne-eCOGRA, okusho ukuthi kutholakala imidlalo eqinisekisiwe kuphela ekhasino. Izidingo zokulayisensa zidinga ukuvikelwa kwe-SSL-encrypted firewall kokuhwebelana emakhasino e-inthanethi futhi i-Pinnacle ayihlukile. I-Pinnacle ayibhekeli ngqo abadlali baseNingizimu Afrika, yize amaphanta (punters) angazuza ngokudlala lapha.
2021 Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Pinnacle Casino
Idiphozithi yokuqala ye-EUR 20 Ama-spin amahhala angu-20 ku-Rich Wilde ne-Book of Dead
Umkhawulo ophansi wediphozithi ngu-EUR 20 noma imali efanayo. Ama-spins amahhala kufanele asetshenziswe kungakapheli izinsuku ezingu-14 efakwe ku-akhawunti yakho. Okuwinile kufanele kubhejwe izikhathi ezingu-35 kumageyimu e-slot kungakapheli izinsuku ezingu-30, kungenjalo kuzodliwa.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Pinnacle Casino
I-Pinnacle Casino ayinikeli nganoma iyiphi ibhonasi yediphozithi engekho ngesikhathi sokubhala, futhi akubukeki sengathi kuzokwenzeka esikhathini esizayo.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yiPinnacle Casino
Ama Spin Wamahhala Ama spins awu10 wamahhala njalo ngoMgqibelo ngoFebruary ngokudlala emidlalweni ekhethiwe.
Imidlalo yesonto ngalinye, ngokuqala kweyokuqala, yi-Divine Fortune Megaways, i-Fruit Shop Megaways, i-Riches of Midgard: Land and Expand, kanye ne-Twin Spin Megaways ngokulandelana. Umkhawulo ophansi wediphozithi ngu–EUR 10 noma imali efanayo iyadingeka kuwo wonke amadiphozithi. Inani lama-spin amahhala lizoba yinani eliphakathi kuka-EUR 0.10 no-EUR 0.20 kuye ngomugqa okhokhayo we-slot.
Uzothola inkinobho ye ‘Login’ neye ‘Join’ phezulu kwesigaba sekhasino kwesokudla. Ungangena ngemvume usebenzisa imininingwane oyifake ngesikhathi sokuvula i-akhawunti yakho. Uma ungakavuli i-akhawunti okwamanje, ungayivula ngokuchofoza inkinobho ewolintshi bese ugcwalisa ifomu lokubhalisa elinezingxenye ezingu-4. Uzocelwa ukuba uthikhe amabhokisi ukwamukela Imigomo Nemibandela nokubhalisela ukuthola imiyalezo yokuphromotha nge-imeyili. Kungumqondo omuhle ukufunda Imigomo Nenqubomgomo Yobumfihlo etholakala kumephu yesayithi.
Lapho i-akhawunti yakho isivuliwe, uzohanjiswa ekhasini lakho lapho ungaqala khona ukudiphozitha imali, ngemuva kokuqinisekisa indlela yakho efanele yokudiphozitha imali. Izindlela zokukhokha ongazithola zizoya ngemali odlala ngayo.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Pinnacle Casino
Kuwukuqagela ukuthi i-Pinnacle yaqala ne-Microgaming ngoba ibingomunye wamaphayona wamakhasino e-inthanethi. Nokho, i-Pinnacle Casino ihambe ibanga elide kusukela lapho futhi manje sisebenzisana neqembu elincane labahlinzeki bemidlalo ephezulu. Ngaphandle kwezinkampane ezishiwo ngenhla, abanye abahlinzeki abangabalingani abaziwayo babandakanya i-SoftBet, i-Endorphina, i-Booming Games, i-Pragmatic Play, i-Play’N Go, i-Red Tiger, i-Yggdrasil, i-Spinomenal, i-Endorphina, i-Habanero, phakathi kwabanye.
Ikhasino ayifisi ukubukeka ngendlela ekhangayo. Iyingxenye yendawo yokubhejela ezemidlalo, futhi yenzelwe ukusebenza kahle. Ilabhulali yemidlalo eyinhloko itholakala phezulu kuwebhusayithi ngakwesobunxele. Isigaba semidlalo yasekhasino singezansi kwalokhu. Ungafinyelela i-lobby ngayinye ekhasini eliyinhloko lesigaba sekhasino bese uhlola i-lobby ngayinye ngokusesha uya eceleni. Wonke ama-lobby anebha yokusesha, kepha awukwazi ukusesha ngonjiniyela ngamunye. I-Pinnacle ayinikezi ngisho nemidlalo ye-demo.
Spina ama-Reels Afinyelela Kwangu-1,765
Njengoba kulindelwe, i-lobby yama-slot inkulu kunawo wonke e-Pinnacle Casino, futhi ibandakanya ama-slot akudala e-3-reel kanye nama-reel amaningi anezinhlobonhlobo zezingqikithi nezici. I-lobby iqukethe eminye imishini eshisa kakhulu emhlabeni njenge-Game of Thrones, i-Gonzo’s Quest, i-Romance Immortal, i-Thunder Screech, i-Shamrock Holmes Megaways, i-Bull in a China Shop, ne-Poseidon Rising, njll.
Amatafula angu-98 Okudlala Kuwo
Imidlalo yasetafuleni ye-Pinnacle Casino yehlukaniswe yaba ama-lobby amathathu e-blackjack, i-roulette, neyeminye imidlalo yasetafuleni, eminingi ongasoze wayibona kwamanye amakhasino. Sebenzisa amakhono akho bese uzama inhlanhla yakho kumidlalo efana ne-Blackjack Multihand, i-Blackjack Royal Pairs, i-Multifire Roulette, i-Roulette yaseYurophu, i-Mini Baccarat, i-Baccarat Professional Series, i-Casino Hold’Em, ne-Three Card Poker Deluxe, nokuningi.
Amakhasino Abukhoma angu-59 Ezigabeni Zonke
I-lobby yemidlalo ebukhoma ye-Pinnacle Casino ihlukaniswe yaba yimidlalo yamakhadi ehlukahlukene nemidlalo yombukiso we-TV, nezinguqulo ze-roulette. Xoxa nabadayisi ababukhazikhazi ngenkathi uzama amakhono akho nabadlali abaphilayo emidlalweni enjengochungechunge lwe-Blackjack VIP ne-Speed Blackjack, uchungechunge lwe-Speed Baccarat, i-No Commission Baccarat, i-Lightening, i-Instant, ne-American Roulette, i-Monopoly, i-Side Bet City, ne-Caribbean Stud Poker, njll.
Iqoqo Elincane Lwezinguqulo Ezithandwayo Ze-Poker Yevidiyo
Ngaphandle kokuthandwa kakhulu kwe-poker yevidiyo nokuqhamuka kwayo njengesigaba sekhasino esijwayelekile, awekho amakhasino amaningi anezinguqulo ezanele zokusekela i-lobby ezimele. E-Pinnacle, imidlalo ye-poker yevidiyo itholakala ngaphansi kwesigaba se-Table Games kepha ifaka phakathi amagama anjenge-Deuces Wild, i-Aces & Faces, i-Jacks or Better, i-Double Bonus Poker, i-Joker Poker, kanye ne-Triple Double Bonus Poker, phakathi kwamanye.
I-Sportsbook Yemiqhudelwano Yompetha Bomhlaba Wonke Nesifunda
Izibuyekezo zithi i-Pinnacle Sportsbook inikela ngama-odds amakhulu kakhulu kanye nokubheja ngenani elikhulu ukwedlula wonke ama-sportsbook. Izinga lokukhokha lingu-96.90, okusho ukuthi isebenza ngenzuzo ephansi kakhulu. Ezinye izimakethe ezitholakalayo yi-English Premier League, i-NBA, i-NHL, i-Cricket Test Series, i-PGA Tours, i-ATP Australian Open, i-Formula 1, i-Snooker World Championship League, i-Alpine Combined, ne-Rugby World Cup, njll.
Imidlalo eyedijithali Ngeke ikukhathaze
Ezemidlalo zedijithali sezineminyaka engamashumi amabili zikhona, kanti i-Pinnacle mhlawumbe ibingenye indawo yokuqala ukuzamukela. Noma kunjalo, i-lobby yezemidlalo zedijithali ine-Instant Football, i-Virtual Tennis Open, i-Basketball League, i-Horse Classics, i-Maxcar Motor Racing, i-Pro-Pong Table Tennis, i-Instant Greyhounds, i-Instant Trotting, ne-Virtual Soccer World Cup, ngaphandle kokunye.
Ukubheja Ngenkathi Abanye Bedlala ama-E-Sports
I-Pinnacle isebenzisa ama-odds enzuzo ephansi kuma e-sports, kanye nokubonisa ama-odds ayonke imidlalo ethandwayo yesizini. I-Pinnacle nayo inebhulogi ngamasu afanele okubhejela ezemidlalo, lapho amalungu angafunda izibuyekezo zomqhudelwano. Khetha okuthandayo ku-Dota 2, i-League of Legends, i-Starcraft 2, i-Warcraft 3, i-Heroes of the Storm, i-King of Glory, i-Tanks of Fame, ne-Hearthstone, njll.
Dlala ama-Jackpot Acebe Kakhulu Emhlabeni Jikelele
Nge-Pinnacle ungafinyelela kwamanye amanethiwekhi omhlaba abanzi kakhulu ama-jackpot aqhubekayo, anezibalo eziphakathi kuka-6, u-7, no-8. Eminye imidlalo engashintsha impilo yakho e-Pinnacle yi-Mega Moolah: i-Absolootly Mad, i-Mega Moolah: Atlantean Treasure, i-Cash Splash, i-Treasure Nile, i-Book of Atem: Wowpot, i-Dr. Fortuno, ne-Holmes and the Stolen Stones, njll.
Pinnacle Mobile Casino: Pinnacle Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
I-Pinnacle casino yeselula iyafana nenguqulo ye-PC, kepha iguqulwe kancane ukuze isibenze kusikrini esincane. Ezemidlo ezisekhasini eliyinhloko zihlanganiswe zaba yimenyu ye-hamburger futhi zabekwa ngaphezulu kwesobunxele. Ngaphezulu kwalokho, kuhlala imenyu eyehlayo equkethe ilabhulali yemidlalo eyinhloko, ehlukaniswe ngezigaba. Ukuchofoza ‘Casino’ kukuhambisa esigabeni semidlalo yasekhasino, esiphinde sahlukaniswa ngezigaba zekhasino, okumele usiseshe ngokuya eceleni.
I-Pinnacle Sportsbook Casino ingafinyelelwa futhi idlalwe cishe kunoma iyiphi i-smartphone, i-tablet, noma idivayisi ye-Mac esebenzisa i-Android, i-iOS, i-Windows Phone, i-Blackberry, kanye nezinhlelo zamaselula. Ipulatifomu yomdlalo ihambisana kahle namapulatifomu amaselula amakhulu. Konke okudingeka ukuthi ukuqinisekise wukuxhumana kwe-inthanethi okuzinzile nomaphi lapho udlala khona.
Imidlalo yeselula yakhiwe ngekhodi ye-HTML5, edala isikrini seselula, eyakha kabusha isikrini esincane. Imidlalo yesimanje yenziwe ngonjiniyela bemidlalo yamaselula kuqala, okusho ukuthi iningi, uma kungeyona yonke, imidlalo ingadlalwa uhamba njenge-Tome of Madness, i-Legacy of Egypt, i-Reactoonz 2, i-Whisker Jones, i-European Blackjack Multihand, i-Atlantic City Blackjack, i-Golden Chip Roulette, i-American Roulette, i-Lightning Dice Live, i-Live Craps, i-Virtual Football League, nazo zonke ezemidlalo.
Ngingayidawuniloda Yini i-Pinnacle Casino Kuselula Yami?
I-Pinnacle Casino ngeyesikhathi lapho amakhasino eselula adawunilodekayo ethandwa, futhi kungenzeka ukuthi yayine-app ngesinye isikhathi. Nokho, okwamanje, ayikho ikhasino ongayidawniloda, kuselula yakho noma ku-PC.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Pinnacle Casino
Visa Yebo Izinsuku eziyi 1-3 Yebo
Master Card Yebo Izinsuku eziyi 1-3 Yebo
Paysafecard Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
Qiwi Wallet Yebo Izinsuku 2-4 Yebo
Trustly Yebo Izinsuku ezingu 1-2 -
iDebit Yebo Ezinsukwini ezi-5 -
InstaDebit Yebo Izinsuku 3-5 -
WebMoney Yebo Emahoreni angu-24 Yebo
Citadel Yebo Izinsuku eziyi 1-3 Yebo
MuchBetter Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Bank/ Wire Transfer Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Inkampane ye-PinnacleCasino Nemininingwane Yokuxhumana
Isungulwe: 1998 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: Impyrial Holdings Ltd. I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Government of Curacao Ingxoxo Ebukhoma: Cha
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi
Ubuhle Nobubi be-Pinnacle Casino
Imidlalo engaba ngu-2000 Ibhonasi yokukwamukela evamile
Iqembu labahlinzeki bemidlalo abahamba phambili Awekho amaphromoshini akhishwa izikhathi eziningi
I-sportsbook yomhlaba wonke Alukho uhlelo lwamakhasimende athembekile
Imidlalo yasekhasino ebukhoma Ayisekeli i-ZAR
Imidlalo edijithali nama-e-sports
Yini Eyenza Ukuthi I-Pinnacle Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-Sportsbook ivumela ama-odds aphezulu nokubheja imali eningi
Abathanda ukubhejela ezemidlalo bangabheja kuwo wonke amaqembu abo nabadlali
Abathandi bekhasino bangadlala ikhwalithi ephezulu evela konjiniyela abaphezulu
Zonke izigaba zekhasino ziyatholaka
Amathuba okushaya ama-progressive ezigidi eziningi
Ababhejela ezemidlalo bangakhetha ezemidlalo zedijithali noma ama-e-sports
Izikhalo nge-Pinnacle Casino Ningizimu Afrika
Azikho izici ezilungele iNingizimu Afrika
Ibhonasi yokukwamukela encane
Awekho amaphromoshini akhishwa izikhathi eziningi
Alukho uhlelo lwemiklomelo
Ingabe i-Pinnacle Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Izikhungo zokubheja eziku-inthanethi azivunyelwe ukusebenza eNingizimu Afrika, futhi azivunyelwe ukunikezela ngezinsizakalo zazo kubahlali baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke, uhulumeni akanamandla okuphatha izikhungo ezingasogwini lolwandle, futhi akazikhombi izakhamizi ezidlala lapho.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Pinnacle Casino?
Uma unebhalansi, yiya ekhasini le-akhawunti yakho bese uchofoza ‘Withdrawal’. Khetha indlela yakho yokukhokhwaa bese ufaka inani ofuna ukulikhipha. Uzohanjiswa ekhasini lomhlinzeki wesevisi wakho, lapho kuzodingeka ukuba ufake imininingwane yakho yasebhange bese uyithumela. Izindlela ezahlukahlukene zokukhokha zinezikhathi zokucubungula ezihlukile
Yini i-Pinnacle Casino?
I-Pinnacle yindawo yokubhejela ezemidlalo kanye nekhasino ye-inthanethi. Ihlinzeka amasevisi ayo kumakethe enkulu yokubhejela ezemidlalo emhlabeni jikelele, ehlanganisa yonke imicimbi yezemidlalo yesifunda neyomhlaba wonke. Isikhungo sihlinzeka ngezemidlalo zedijithali nemidlalo ye-e-sports kubathandi bezemidlalo abakwazi ukubhejela ezemidlalo bukhoma. I-Pinnacle ibuye ibe nemidlalo yasekhasino ye-inthanethi ehlanganisa izigaba ezahlukahlukene ezinjenge-slots, imidlalo yasetfuleni, ikhasino ebukhoma, nemidlalo ejwayelekile. I-Pinnacle inilayisense kaHulumeni waseCuracao.
Ngubani umnikazi we-Pinnacle Casino?
IPinnacle iphethwe yi-Impyrial Holdings Ltd., inkampani ebhaliswe e-8A Pitmans Alley Main Street, eGibraltar GX11 1AA esebenza egameni le-Ragnarok NV, yase-Pletterijweg 43, Willemstad, Curacao.
Ingabe i-Pinnacle Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
I-Pinnacle ngokuyinhloko iyinkundla yokubhejela ezemidlalo. Ine-sportsbook enkulu ehlanganisa yonke imidlalo yesifunda neyomhlaba wonke. Ibuye inikeze ukubhejela ezemidlalo zedijithali nama-e-sports, ngaphandle kwemidlalo ejwayelekile yasekhasino.
Ingabe i-Pinnacle Casino Inikela Ngohlelo lwe-VIP?
I-Pinnacle Casino ayinalo uhlelo lwabadlali abathembekile noma Ikilabhu ye-VIP,
I-Pinnacle casino inikeza kuphela amabhonasi ama-spin amahhala okwamanje futhi okuwinile kufanele kubhejwe izikhathi ezingu-35 ngaphambi kokuthi ukwazi ukukukhipha.